Hooyo doonaysa in loo naxariisto nin shan carruur ah ka dilay – hareerley
Hooyo doonaysa in loo naxariisto nin shan carruur ah ka dilay
June 12, 2019 Daadir	0 Comments
Hooyo Maraykan ah oo shan carruur ah uu ka dilay aabahood ayaa xeerbeegti dacwaddiisa qaadaysa ka codsatay in aysan dil ku xukumin. Amber Kyzer ayaa maxkamada ku taalla South Carolina u sheegtay in Tim Jones Jr “uusan wax naxariis ah tusin carruurta, balse carruurtiisu ay jeclaayeen”.
Ninkan 37 jir ah ayaa bishii May lagu helay in uu dilay carruurtaas walaalaha ah oo da’doodu u dhaxaysay hal ilaa siddeed sano. Carruurtu ayuu ku laayay gurigiisa oo ku yaallay Lexington taariikhdu markay ahayd 28 Agoosto 2014.
Guurtidan ayaa ka baaraan dagaya in Jones dil lagu xukumo ama xabsi daa’in la dhigo. “Waan maqlay waxay carruurtu mareen iyo xanuunka taabtay,” ayay tiri Kyzer oo maxkamadda ku sugnayd Talaadadii. “Hooyo ahaanna, haddaan awooddo wajigiisaan badali lahaa. “Taasi waa hooyonimada igu jirta.
Taasi waa dulqaadka hooyo nimo.” Kyzer ayaa xeerbeegtida u sheegtay in inta badan nolosheeda ay ka soo horjeedday dilka la isku xukumo.
Waxay sheegtay in inkastoo mararka qaar ay rajaynaysay in waaxda caddaaladdu ay si daran u ciqaabto ninkeedii hore, haddana aysan marka ugu dambaysa doorateen in dil lagu xukumo.
“Haba yaraatee wax naxariis ah ma uusan tusin carruurta,” ayay ku celisay waxayna ku sii dartay “Carruurtaydu way jeclaayeen isaga marka haddii aan u hadlo carruurtayda oon dareenkayga meel iska dhigo, sidaas ayaan leeyahay”.
Kyzer ayaa intaas ku dartay in ay ixtiraami doonto go’aankaste oo xeerbeegtidu gaarto. Waxaa loogu yeeray in ay makhraatigeeda ka hor caddayso qareennadii difaacayay.
Lamaanahaas ayaa is guursaday lix toddobaad ka dib markii ay ku kulmeen meel carruurta lagu ciyaarsiiyo oo ku taalla Chicago sannadkii 2004tii, halkaas oo ay ka wada shaqayn jireeen.
Balse bishii May ayay sheegtay in guurkoodu uu xumaaday ka dib markii uu diinta ku dhagay dalbadayna in dumarka loogu talagalay “in aan la arkin lana maqlin codkooda”.
Markii ay is fureen sagaal sano ka dib, waxay u ogolaatay in uu carruurta xannaaneeyo maadaama oo sannadkii ay soo galaysay 80,000 oo doolar. Carruurta ayayna Axad kasta ku arki jirtay makhaayadda Chick-fil-A.
Maxkamadda ayaa dhagaysatay in Maalinta uu Jones dilay carruurta uu yimid Nahtahn oo lix jir ah oo ku ciyaaraya qaybisada korontada ka dibna uu aad u xanaaqay. Wiilkii ayuu dilay ka dibna wuxuu go’aansaday in uu ceejiyo afartii carruurta ahayd ee kale oo kala ahaa Elaine oo hal sano jiray, Gabriel oo labo jir ahaa, Elias oo toddobo sano jiray iyo Mera oo siddeed jir ahayd.
Jones ayaa maydadkii carruur ku duuduubay baco sida dacwaddiisii lagu sheegay, sagaal maalmood ayay gaarigiisa saarnaayeen ka dibna maydadkii ayuu ku aasay baadiyaha Alabama.
Mississippi ayaa lagu xiray ka dib markii uu askari uriyay urkii maydadka oo gaariga dhankiisa ka soo baxayay.
Jones ayaa sheegay in uusan dambiile ahayn sababtuna ay tahay in uu waalan yahay.
Qareennadii difaacayay ayaa sheegay in uu qabay marxalad afka qalaad lagu dhaho schizophrenia oo waxyeelo wayn u gaysata sida ay maskaxdu u shaqayso isla markaasna uusan helin dawo, xannuunkaas maskaxda ku dhaca ayay hooyadiina qabi jirtay.
Waxay ku doodeen in ay maskaxdu si noqotay ninkan markii xaaskiisii ay ka raacday wiil aan labaatan sano gaarin oo albaabka ku dhagan daganaa.
← (Codeyn):-Xildhibaanada iyo Senatarada ka Soo jeeda Beesha Biimaal Oo Codqaadidooda ka Socoto Baraha Bulshada
Gudoomiyaha Gobolka Shabeelada hoose iyo Wafdi uu Hogaaminayo ayaa maanta safar booqasho ah ku gaaray Degmada Qoryooley:-(Sawiro) →
Israeli forces and settlers enter Al-Aqsa Mosque compound0 50
Erdogan oo malxiis ka ahaa arooska Ozil0 50
(Daawo):-Xogta Dahsoon: Todoba Jeer oo ay u dhoweyd in Hitler la dilo0 50
(Daawo);-Xogta Dahsoon Ruushka iyo Shiinaha oo is dhinac taagay Iran0 50
Germany’s Merkel warns of populism’s rise in Europe0 50
Soomaliland Oo Ciidamo Dheeraad ah Geysey Sool iyo Sanaag0 50
Sudan Protesters Want Civil Disobedience to Pressure Military Council0 50
Xasuuq wadareed foolxun Oo ka dhacay Magaalada Gaalkacyo0 50